အဆိုပါအသည်း၏ Sarcoidosis (70% အထိ) sarcoidosis နှင့်အတူလူနာအများစုသက်ရောက်သည်။ သို့သော်ထိုလူနာအများစုမရှိသလောက်သို့မဟုတ်ဘယ်တော့မှအသည်းအတွက်ရောဂါလက္ခဏာတွေပြသပါ။ သူတို့ဟာမျိုးကို Asymptomatic လူနာအဖြစ်လူသိများကြသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသည်း sarcoidosis အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာပါ။
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကို sarcoidosis အထူးကု၏အကူအညီဖြင့်ရေးသားပြုစုထားသည် ဒေါက်တာ Deepak Joshi, အတိုင်ပင်ခံ Hepatologist, ဓမ္မရာဇဝင်ကောလိပ်ဆေးရုံမှ, လန်ဒန်။
အသစ် sarcoidosis ရောဂါလူနာအသည်း sarcoidosis မဆိုနိမိတ်လက္ခဏာကိုစစ်ဆေးနိုင်ရန်မိမိတို့၏မိသားစုဆရာဝန်သို့မဟုတ်အတိုင်ပင်ခံမေးဖို့သင့်ပါတယ်။
ဤသည်မှာလက်ကမ်းကြော်ငြာ Sarcoidosis နှင့်ရောဂါလက္ခဏာ, ရောဂါ, ကုသ options နဲ့အလားအလာအပါအဝင်အသည်းအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ အခြေအနေကို၏ရှားပါးသောသရုပ်အချို့အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်လည်းရှိပါသည်။
ရောဂါလက္ခဏာများအသည်း sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်လူနာအကြောင်းကို 20% အတွက်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားလက္ခဏာတွေပါဝင်သည်:
Hepatomegaly (လူနာအထိ 20% အတွက်ပစ္စုပ္ပန်အသည်းပျတိုး,)
(ထက်နည်း 5% လူနာအတွက်ပစ္စုပ္ပန်အဝါရောင်အရေပြား,) အသားဝါ
Hepatic function ကိုစမ်းသပ်။ ဤသည်မြင့်မားသောသွေးရည်ကြည် alkaline များ phosphatase (ALP) နှင့် gamma glutamyl transpeotidase (GGT) ပြသထားတယ်။
အသည်းခန္။ ဒါဟာအသည်းထဲမှာ granuloma ၏ရှေ့မှောက်တွင်အတည်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
မှန် CT scan ။ ဒါဟာအသည်းထဲမှာမဆို granuloma (ရောင်ရမ်းခြင်း၏သေးငယ်တဲ့ဒေသများ) ကိုပြသပါလိမ့်မယ်များနှင့်လည်းအသည်းခြောက် (သေးငယ်တဲ့, nodular အသည်း) ၏အရိပ်လက္ခဏာကိုသရုပ်ပြနိုင်ပါတယ်။
အခြို့သောရှားပါးခြင်းနှင့်နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများတွင်အသည်း sarcoidosis သည်အခြားအခြေအနေများအဖြစ်ထင်ရှားစွာပြနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်:
1. နာတာရှည် Cholestasis
အဆင့်မြင့် Hepatic sarcoidosis နှင့်အတူလူနာတစ်ဦးနာတာရှည် cholestatic syndrome ရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။ သည်းခြေအူဖို့အသည်းကနေစီးဆင်းလို့မရဘူးနေရာအရပ်ဖြစ်၏။
ရောဂါလက္ခဏာတွေကို: ပုံမှန်မဟုတ်သောအသည်း function ကိုစမ်းသပ်မှု၏ Cholestatic ပုံစံ။
ကုသမှု: ကန့်သတ်ကုသမှုကိုရှေးခယျြစရာရှိပါတယ်။ prednisone ၏ 30 မှ 40 မီလီဂရမ် / နေ့၏ဆေးများအတွက် Corticosteroids လက္ခဏာတွေ, နိမ့်သွေးရည်ကြည် ALP, GGT အဆင့်ဆင့်တိုးတက်စေခြင်းနှင့် hepatomegaly တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေနိုင်သည်။ Ursodeoxycholic acid ကိုအသည်း function ကိုစမ်းသပ်မှုများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေနိုင်သည်။
2. Portal ကိုသွေးတိုး
portal သွေးတိုးရောဂါအသည်းပတ်လည်ရှိသွေးပြန်ကြောအတွင်းသွေးဖိအားတစ်ခုတိုးပါတယ်။ ဤအခြေအနေမှမကြာခဏ biliary fibrosis သို့မဟုတ်အသည်းခြောက်၏ရလဒ်အဖြစ် Hepatic sarcoidosis နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဒါဟာအဆင့်မြင့်လူနာများတွင်ပိုမိုဖွယ်ရှိသည်။
အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း (GI) ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ dilated သွေးကြော (varices) မှသွေးထွက်
ရောဂါလက္ခဏာတွေကို: ဝမ်းဗိုက် ultrasound နှင့်အထက် GI endoscopy ။
ကုသမှု: Diuretics ဆီး ascites ဘို့ပေးထားနိုင်ပါသည်။ Betablockers အဆိုပါပေါ်တယ်သွေးပြန်ကြောစနစ်တွင်ဖိအားကိုလျှော့ချကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သွေးထွက် varices များအတွက်ကုထုံး endoscopy လိုအပ်ပါသည်။
အသည်းခြောက်များသောအားဖြင့်အမြဲတမ်းဖြစ်သည့်အသည်း၏အဆင့်မြင့်အမာရွတ် (fibrosis) ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်အသည်း sarcoidosis ဖြစ်ပွားမှုလျော့နည်းသည်ထက် 1% ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ရှုပ်ထွေးမှုများ (Hepatic encephalopathy)
ကုသမှု: Standard treatment of cirrhosis and its complications. Please refer to the British Liver Trust. Patients with cirrhosis should be enrolled inasurveillance programme for hepatocellular carcinoma.
အသည်း sarcoidosis နှင့်အတူအများစုမှာလူနာများရောဂါအပျော့စားပုံစံရှိသည်နှင့်ကုသမှုမလိုအပ်ပါဘူး။ လူနာအထိ 75% corticosteroids မရှိဘဲတိုးတက်မှုများနှင့်အရာကြွင်းလေတည်ငြိမ်ရှိနေဆဲပြသပါ။
သို့သော် corticosteroids နှင့်အတူကုသမှုအဆင့်မြင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်အသည်း function ကိုစမ်းသပ်မှုများတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ corticosteroids ၏အကောင်းဆုံးကြာချိန်မသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းခြောက်နှင့်အတူအားလုံးလူနာတစ်ဦးအသည်းအထူးကုသို့မဟုတ် gastroenterologist ရည်ညွှန်းရပါမည်။
အသည်းအစားထိုး decompensated အသည်းရောဂါ (ascites ၏ဥပမာဖွံ့ဖြိုးရေး, Hepatocellular carcinoma (HCC), variceal သွေးထွက်) နဲ့လူနာတွေအတွက်ခိုင်လုံသော option တစ်ခုဖြစ်သည်။